काेराेनाकाे पहिलो खोप टेकु अस्पतालका निर्देशकले लगाउने, खोपले ‘साइडइफेक्ट’ गरे को जिम्मेवार ? « Kathmandu Pati
काेराेनाकाे पहिलो खोप टेकु अस्पतालका निर्देशकले लगाउने, खोपले ‘साइडइफेक्ट’ गरे को जिम्मेवार ?
काठमाण्डु – सरकारले सातै प्रदेशमा भोलि बुधबारबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गर्ने भएको छ ।
भारत सरकारले बिहीबार अनुदानमा दिएको १० लाख डोज कोभिड–१९ विरुद्धको खोप बुधबारदेखि वितरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सातै प्रदेशको खोप भण्डाराण केन्द्रहरूमा पुर्‍याईसकेको छ ।
माघ १४ अर्थात भोलिदेखि फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाइकर्मीहरूलाई कोरोना खोप लगाउने तयारी सरकारको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार आगामी माघ १४ गते बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट खोप अभियानको घोषणा गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणासँगै काठमाण्डुमा कोरोना भाइरसविरूद्धको पहिलो खोप टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले लगाउने भएका छन् । उनले आफूसहित टेकु अस्पतालका सबै स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउने बताए । त्यसपछि सातै प्रदेशका ६२ अस्पताल र १२० भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट एकैसाथ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिनेछ ।
पहिलो चरणको खोप अभियानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक, कोभिडको संक्रमणबाट मृत्यु भएका शवको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइकर्मीहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले पहिलो चरणमा ४ लाख ३० हजार जनालाई खोप लगाउने लक्ष्यका साथ तयारी तीव्र पारिएको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री त्रिपाठीले उक्त खोप विश्वसनीय भएको भन्दै निर्धक्क भएर खोप लगाउन आग्रह समेत गरेका छन् । वर्तमान सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च महत्व दिएकाले पनि कोरोनाको उपचारमा आशाका नयाँ किरण देखिन थालेका छन् ।
खोपबाट केही भएमा को जिम्मेवार ?
सरकारले निर्धक्क भएर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरिहेका बेला कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपबाट उत्पन्न नकारात्मक असरको जिम्मेवार को हुने ? भन्ने विषय अहिलेको मुख्य विषय बनेको छ ।
भारतको खोप उपत्पादक कम्पनी सेरमले समेत स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका सम्स्या भएका व्यक्तिहरुले खोप नलगाउन आग्रह गरिसकेको छ । यता सरकारले भने कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन चाहनेहरूले खोपका कारणले भविष्यमा कुनै समस्या आएमा आफु स्वयम जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको खोप अभियानप्रति अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने केही स्वास्थ्यकर्मीहरुमा भने कुनै उत्साह देखिँदैन । केही स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारको कोरोना खोप अभियानमा सहभागी नुहने बताउन थालिसकेका छन् ।
खोप कार्डमा लेखिएको यही वाक्यप्रति असहमति जनाउँदै केही स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारको खोप कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका छन् । ‘अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनुपूर्व यो कार्डमा लेखिएको मञ्जुरीनामामा सही छाप गर्नुपर्ने ? सरकारलाई म मञ्जुरी दिन्नँ,’ बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक अली अकबर हुसैनले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
शनिबारबाट सुरु हुने ‘मेयरकप क्रिकेट’ डिशहोमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण हुने
काठमाण्डु – राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यक्रम अनुसार नेपाल क्रिकेट संघद्धारा
ज्योति विकास बैंकद्वारा बेनी अस्पताल र बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई ‘बेबी…
काठमाण्डु – ज्योति विकास बैंकले सामाजिक उत्तर दायित्व सम्बन्धि ‘हाम्रो